.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: Flash Menu လေးတွေ အလွယ်လုပ်ချင်သူများအတွက်...
Flash Menu လေးတွေ အလွယ်လုပ်ချင်သူများအတွက်...
Flash Menu လေးတွေ လုပ်ချင်သူများအတွက် ဒီဆော့ဝဲလ်လေးက အရမ်းကို အသုံးဝင်မှာပါ။ Flash Menu ဒီဇိုင်းတွေ
များပြားစုံလင်ပြီး ဖန်တီးပြုလုပ်ရတာလည်း အရမ်းကို လွယ်ကူပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Blogger တွေ မိမိ Blog က
Labels တွေကို Flash Menu လေးတွေနဲ့ လုပ်ချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လင့်လေးတွေကို ခုလို Flash နဲ့
Menu လေးတွေ လုပ်ထားချင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာ အနော် နမူနာလေး တစ်ခု လုပ်ပြထားပါတယ်။
ခုကတော့ ကျွန်တော် နမူနာမျှသာ လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲလ်ထဲမှာ Flash Menu တွေကို ဒီဇိုင်း အမျိုးအစားကို
Art, Business, Classic, Gigh Tec, Image, Modern, My Templates, Xmas ဆိုပြီး ၈ မျိုးခွဲထားပြီး အဲဒီအထဲမှာလည်း
Flash Menu ဒီဇိုင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း သေးသေးလေးပါ။ 3.2 MB ပဲ ရှိပါတယ်နော်..
ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။ ကူးယူမျှဝေမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ဆိုဒ်ကို Credit ပြန်ပေးပါရန်။
Download: 123 Flash Menu Software
Posted by Thurainlin at 09:58
Labels: Blog, Flash, Software